काठमाडौं । सरकारले देशभरका सहकारीको वित्तीय विवरणहरु अनलाइन प्रणालीमा राख्ने भएको छ । यसअघि कागजी रूपमा विवरणहरु लिँदा सहकारीको अवस्थाबारे ‘अफ साइड’ अनुगमन गर्न नसकिएको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण..
काठमाडौं । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले कुटनीतिकलगायत सबै विकल्प खोजेर योजना तयार गरिरहेको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले जनताको दैनिक..
विरगञ्ज । सधैँ वहनको लामो लाम र गोलदाम भरिभराउ रहने वीरगन्ज भन्सार हाल पूरै खाली भएको छ । मधेस केन्द्रित दलको बन्द हडताल र नाकाबन्दीका कारण विगत दुई महिनादेखि नेपालका..
काठमाडौँ । दक्षिणी सीमामा नाकाबन्दी चलिरहँदा उत्तरी छिमेकीले नेपालले मागे इन्धनलगायतका आपूर्ति गर्न तयार रहेको बताएको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनयिङलाई प्रश्न सोधिएको थियो, चीन..
विभिन्न नाकाबाट इन्धन भित्रिदैं, बीरगञ्ज नाका अझै ठप्प
काठमाडौं । भारतले लगाउँदै आएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्ति अझै सहज हुन सकेको छैन । मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्ज लामो समयदेखि ठप्प रहँदा इन्धन अभाव चर्किंदै गएको छ ।..
काठमाडौँ । हिन्दूको महत्वपूर्ण चाड दसैँ तथा तिहार सुरु भएपनि राजधानी काठमाडौँमा खाना पकाउने ग्यासको अभावका कारण उपभोक्ता चर्को सङ्कट ब्यहोर्न बाध्य छन् । चाडवाडमा घर जान चाहने उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थको..
काठमाडौं । चीनसँगको ब्यापारिक रसुवागढी नाका शुक्रबारदेखि खोल्ने तयारी भइरहेको छ । नाका खोल्ने विषयमा निर्णय लिन आज बुधबार रसुवागढी भन्सारमा नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच छलफल हुँदैछ । भूकम्पपछि चीनतर्फको सडक..
हवाइ इन्धन आपूर्तिका लागि वायुसेवा निगमलाई अनुमति, अन्यको टुंगो लाग्न बाँकी
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले हवाइ इन्धन आपूर्ति गर्ने जिम्मा नेपाल वायुसेवा निगमलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । आयल निगम व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको निगमका नायब..
काठमाडौं, असोज २५ । भारतले सीमा नाकाहरुमा लगाउँदै आएको अघोषित नाकाबन्दी खुकुलो पार्दै लगेको छ । नेपालीहरुको प्रमुख चाड दसैं घरदैलोमा आइसक्दासमेत नाकाबन्दी कायम रहेकोमा सोमबारदेखि नाकाहरु खुकुलो पारेपछि सर्वसाधारण आशावादी..
काठमाडौं । इन्धन हाहाकारले देश तरंगित रहेको बेला उपत्यकाकै जमिनमुनि खाना पकाउन उत्तम मानिएको मिथेन ग्यास प्रचुर मात्रामा देखिएको छ। यसबारे कौतुहलता बढेको छ। कसरी कम लगानीमार्फत यसको उपभोग गर्न..
१२ कम्पनीले गरे ईन्धन आयातको टेण्डर दर्ता
काठमाडौं । भारतले नाकाबन्दी लगाएर ईन्धन आयात ठप्प पारेपछि नेपाल आयल निमगले अल्पकालीन ईन्धन आयातका लागि खोलेको ग्लोबल टेण्डरमा १२ कम्पनीले आशयपत्र दाखिला गरेका छन् । यसरी आशयपत्र दर्ता गराउनेमा..
काठमाडौं । पेट्रोलिय आपुर्तिका लागि नेपाल आयल निगमले गरेको ग्लोबल टेण्डरमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन पनि सहभागि हुने भएको छ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएर आपूर्तिमा व्यवधान सिर्जना गरिरहेकै अवस्थामा आइओसीले..
भारतले तेल दिन थाल्यो, गोन्डामा २६ ट्यांकर तेल लोड, अन्य नाकाबाट पनि दिने संकेत
काठमाडौं । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले डिपोमा पुगेका नेपाली ट्यांकरलाई पेट्रोलियम पदार्थ दिने संकेत गरेको छ । आइओसीले आइतबार विदाको दिनमा समेत डिपो खोलेर नेपाली ट्यांकरलाई तेल दिने थालेको हो । आइओसीले..
​२७ गते निगमले निजी सवारी साधनलाई ७ लाख लिटर पेट्रोल बाँड्ने, मोटरसाइकललाई ५ लिटर र कार, जिपलाई १५ लिटर
काठमाडौं । भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल आयल निगमले निजी सवारी साधनलाई इन्धन दिन छाडेको छ । इन्धन बाँड्न छाडेपछि उपत्यकाका सर्वसाधारण दसैंमा घर जान पाइने हो कि नपाइने हो..
काठमाडौं । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) को मुख्यालय मुम्बईले शनिबार आयल निगमलाई टेलिफोन गरेर आइतबार रक्सौल बाहेकका डिपोमा पेट्रोलियम ट्यांकर पठाउन आग्रह गरेको छ। आइओसीको ट्याङ्कर पठाउन आग्रह गरेपनि तेल भरेर..
​थानकोट डिपोबाट बाड्ने ईन्धनको परिमाण घटाउदै निगम, मंगलबार कुन कुन पम्पलाई दियो
काठमाडौं । भारत सरकारको नाकबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि थानकोट डिपोमा मौज्दात रहेको पेट्रोलियम पदार्थ कोटा प्रणालीमा वितरण गर्दे आएको आयल निगमले मंगलबार वितरण गर्ने पेट्रिोलियम पदार्थको परिमाण घटाएको..
​पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका टयाङ्करसहित ६०० गाडी गन्तव्यमा पुर्‍याइयो
विराटनगर । विराटनगर सुरक्षाकर्मीले टयाङ्कर ,मालबाहक ट्रक र बसलगायतका करिव ६०० गाडीलाई सुरक्षा घेरामा राखेर गन्तव्यसम्म पुर्‍याएका छन् । विराटनगरस्थित रानी भन्सारमा रहेका ७९ वटा गाडीसहित २९३ वटा गाडीलाई मोरङ जिल्ला..
​मोर्चाद्वारा दुई ट्रकमा आगजनी, पेट्रोल पनि जलाइयो
वीरगन्ज । जगरनाथपुरमा राखिएको ना २ ख ४५५२ र ना २ ख ५९७५ नम्बरको खाली ट्रक मध्यरातमा मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । बन्दको अवज्ञा गरेर..
काठमाडौं । छिमेकी चीनले नेपाललाई संकट पर्दाको अबस्थामा खुला दिलले सहयोग गर्दै आएकोमा अहिलेको उर्जा संकट समाधान गर्न पनि अग्रसरता देखाएको छ । उसले नेपालतर्फका अबरुद्ध दुई नाकालाई छिटो संचालनमा ल्याउने..
एजेन्सी । विश्वका सर्वाधिक धनाढ्य सय जनाको सूचीमा परेका आठ व्यक्ति यस्ता पनि छन्, जसको पारिवारिक पृष्ठभूमि त्यति राम्रो छैन । औसत मानिससँग तुलना गर्न नसकिने खालका छन् । ती..
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई फेरि पत्र काटेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन मुम्बइका प्रबन्ध निर्देशकलाइ पत्र काटेर नेपाल आयल निगमले तेल नआउँदा बखतको क्षतिपूर्ति तिर्न माग गरेको..
​राजकर्णिकार उद्योग वाणिज्य महासंघको विशिष्ट सदस्यमा मनोनित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिले भास्करराज राजकर्णिकारलाई विशिष्ट सदस्यमा गरिएको मनोनयनलाई अनुमोदन गरेको छ। पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकर्णिकार यसअघि महासंघको अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए। दुई वर्षअघि भएको..
काठमाडौं । औद्योगिक घराना शारडा गु्रपले मदिरा उत्पादनमा पनि लगानी गरेको छ । ग्रुपले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा विराटनगरमा प्रिमियम अर्गानिक्स प्रालिमार्फत विभिन्न ब्रान्डमा मदिरा उत्पादन तयारी गरेको हो..
काठमाडौं । आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले भारतले तेल दिने वा नदिने आज थाहा हुने बताएका छन् । भारतले शनिबार नाकाबन्दी खुलेको बताए पनि आइतबार तेल दिएन । मागको १० प्रतिशत मात्र दिने..
काठमाडौं । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले संयुक्तरुपमा अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलबिद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउन नहुनेमा जोड दिइएको छ । प्राधिकरण र टेलिकमले सो आयोजनाको..
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.९ प्रतिशत भएको छ । पाँचौ पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणको नतिजाका आधारमा संशोधित बस्तु र सेवाको डालोअनुसार साउन महिनामा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीतिमा..
​अब निजी सवारी साधनमा जोर विजोर नियम नलाग्ने
काठमाडौं । सरकारले निजी गाडीलाई तेल दिन छाडेपछि जोर विजोर प्रणाली हटाउने भएको छ। आजदेखि निजी गाडीलाई तेल दिन छाडिएकाले जोर विजोर प्रणाली उलंघन गरेर गाडी चलाएपनि कारबाही नगर्ने गृह मन्त्रालयले..
भैरहवा । रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट इन्धन र अन्य उपभोग्य पदार्थ बोकेका गाडीहरु नेपाल भित्रिन सुरु गरेका छन् । बुधबार नेपाल र भारत दुबै देशका सुरक्षाकर्मी र भन्सार अधिकारीहरुबीचको बैठकले भारतमा रोकिएका..
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव बढ्दै जाँदा नेपाल आयल निगमले तेल वितरणमा फेरि कटौती गर्ने भएको छ। निजी सवारी साधन र निर्माण सामाग्री बोक्ने ठूला ट्रक तथा टिपरलाई पेट्रोलियम पदार्थ..
​मुस्ताङमा चीनबाटै आउँछ पेट्रोलियम पदार्थ, अन्य जिल्लामा ल्याउन किन सकिदैन?
पोखरा । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव झेलीरहेको अवस्थामा मुस्ताङको लोमान्थाङका स्थानीयले कोरला नाका खोल्न माग गरेका छन् । यो नाका नेपाल—चीनको सबै भन्दा सुघम भएको बताउँदै सरकारसँग..
Results 889: You are at page 24 of 30